Kuvakazve Kufamba muIsrael uye Middle East kubva kune vari mukati
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Podcasts » Kuvakazve Kufamba muIsrael uye Middle East kubva kune vari mukati
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Interviews • Israel Breaking News • Jorodhani Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Podcasts • Dhinda Zviziviso • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe nekuchengetedzeka kuMiddle East kwagara kwakaoma, uye neCOVID-19 haina kuve nyore. "Wese munhu ari ega", akadaro Dr. Taleb Rifai.
Sangana naFelice Friedson, muparidzi weUS based TheMedialine.org ari kubatana nesu kubva kuJerusarema.
Dr. Taleb Rifai, aimbova Secretary-General weUNWTO arikupa mhinduro kubva kuna Amman, Jordan.
Co-host Dr. Peter Tarlow muKoreji Station, Texas pamwe naJuergen Steinmetz, CEO we TravelNewsGroup muHawaii vari kuongorora hurukuro iyi pazvinhu zvakaoma zvekushanya kuMiddle East panguva yeCOVID-19 uye kusagadzikana.
Iyo hurukuro inopindwa ne eTurboNews vaverengi uye nhengo dze kuvaka.travel kubva kumativi ose enyika.
Iyi hurukuro inowanikwawo pa www.livestream.travel
Tumira mune yezwi meseji: https://anchor.fm/etn/message
Tsigira iyi podcast: https://anchor.fm/etn/support
Boris Johnson: Hapana kuzorora kwekutanga kwe COVID-19 ...